Carruur Walaalo Ah Oo Maydkooda Laga Helay Baydhaba | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Carruur Walaalo Ah Oo Maydkooda Laga Helay Baydhaba
Carruur Walaalo Ah Oo Maydkooda Laga Helay Baydhaba
Saaka dadka degaanka ay kusoo waaberiisteen dhacdo naxdin ku abuurtay bulshada ku dhaqan Magaalada baydhabo, kadib markii laga helay Magaalada maydka labo carruur ah oo walaalo ah.
Warar ka aan helayno ayaa sheegaya in Samiira iyo Iiman oo ahaa labo caruura oo walaalo ah Maydkooda lasoo dhigay Magaalada, waxaana la sheegay in carruurta la weysanaa tan iyo shalay, iyadoo ehelada carruurtaasi ay baadi goob ugu jireen ilmahaasi.
Warar is khilaafsan ayaa kasoo baxaya falkaasi naxdinta leh ee Baydhabo ka dhacay, waxaana wararka qaar ay sheegayan in carruuta kalyaha lagala babaxay kadibna Maydkooda la iska soo tuuray, halka warar kale oo aan helnay ay tibaaxayaan in carruurta oo mayd ah la helay.
Carruurta ayaa waxa dhalay sida la sheegayo Xildhibaan hore Aweys Abdullahi oo si weyn looga yaqaanno gudaha Magaalada baydhabo, walina ma jiro war rasmi ah oo kasoo baxay hay’adaha amniga iyo maamulka Magaalada, oo ay kaga hadlayaan dhacdadaasi naxdinta leh ee Baydhabo ak dhacday.
Magaalada ayaa waxaa horay uga dhacay falal arga-gax leh oo carruur loo gaystay, waxaana horay Magaalada lagu faraxumeeyay wiil aad u da’yar, iyadoo dhacdadaasi ay noqotay mid bulshada qaybaheeda kala duwan ay si weyn kaga xumadeen.
Carruur Walaalo Ah Oo Maydkooda Laga Helay Baydhaba was last modified: April 8th, 2021 by Admin
New Zealand oo hakisay socotada uga imaaneysa India
Dowladda Mareykanka oo digtay mawaadinteeda ku nool dalka Jabuuti
Rooble “Waa in la ilaaliyaa hufnaanta iyo cadaaladda doorashada Aqalka sare ee Somaliland”
Maamulka Trump oo dedejinaya qorshe lagu ciqaabayo Shiinaha
Maamulka Jubbaland oo shaacisay qodobadii ay isku fahmi waayeen ROOBLE
Shariif Sh. Axmed “Waxaan hay’adaha amniga ugu baaqayaa inay waqtigooda geliyaan ka hortagga argagixisada”